Android မှာ USB OTG connection ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ Androidsis
Android မှာ USB OTG connection ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
Francisco Ruiz | | လဲ tutorial
ကွန်နက်ရှင် USB OTG Android Terminal များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ Device များပိုမိုများပြားလာသည် USB OTG သဟဇာတစျေးကွက်အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များအပေါ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုမည့်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် မည်သည့်အရံပစ္စည်းကိုမဆို Android terminal များနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ လွယ်ကူစွာကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာပေါ်မှာလိုအဖြစ်။ ရုံ plug နှင့်သွားပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာခေါင်းစဉ်ပေါ်ရှိရှင်းလင်းဗီဒီယိုမှသင့်အားမှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည် ဤ USB OTG ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် Pen Drive (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal သို့ချိတ်ဆက်ထားသော hard disk ကိုဆက်သွယ်ပါ၊ Windows တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သကဲ့သို့၊ ဤသိုလှောင်ရေးမီဒီယာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။ အတူတူပင်၏လုံခြုံအဆက်ပြတ်.
ထိုကဲ့သို့သောကီးဘုတ်, ကြွက်သို့မဟုတ် joysticks အဖြစ်အရံပစ္စည်းမဆိုအမျိုးအစားချိတ်ဆက်နေစဉ် အပိုပစ္စည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အပြင်လွယ်ကူစွာထပ်မံမတပ်ဆင်ဘဲ၎င်းကိုဖြုတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal များနှင့်မည်သည့်ပြင်ပသိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုကိုမဆိုဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြုတ်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်၎င်းကိုအပိုထပ်ထည့်စရာမလိုဘဲ disconnect လုပ်ခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုအလွယ်တကူ disconnect လုပ်ရန်သတိထားရမည်။
ဤ USB OTG လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောခေတ်မီသောစက်ကိရိယာများစွာတွင်အန်ဒရွိုက်အသိပေးကြေငြာခြင်းသို့မဟုတ်ကုလားကာကိုတွန်းဖွင့ ်၍ ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစေသည်။ (ဗီဒီယိုထဲမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း), ကိုယ်ပိုင်အတွက် ပြင်ပသိုလှောင်မှုချိတ်ဆက်အကြောင်းကြားစာ။ ၎င်းသည် Android မော်ဒယ်များတွင်မဖြစ်သော်လည်း USB OTG ကိုမည်သို့အဆက်ဖြတ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်ရှင်းပြချက်သည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း လုံခြုံစွာအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ မဆိုနည်းလမ်းများ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောသိုလှောင်မှု ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal သို့ချိတ်ဆက်ထားသည် USB OTGငါတို့သာသွားရတော့မယ် ချိန်ညှိချက်များ / သိုလှောင်မှု နှင့် option ကိုနှိပ်ပါ USB မှတ်ဉာဏ်ကိုပိတ်ပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပြီး USB OTG ဆက်သွယ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော hard drive သို့မဟုတ် Pen Drive ကိုလုံခြုံစွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal နှင့်တူသောကီးဘုတ်များ၊ ကြွက်များသို့မဟုတ်အခြားအရံပစ္စည်းများကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော disconnection သည်ရိုးရှင်းစွာမဟုတ်ပါ။ cable ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်မင်းပြီးပြီ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android မှာ USB OTG connection ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာတစ်ခုရှိသည် huawei g7 သည်ခဲတံသို့မဟုတ် otg ကိုမည်သို့မှတ်မိမည်နည်း။
ငါတူညီသောသံသယရှိသည်, ငါ huawey p7 ၏အသုံးပြုမှုကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး
LG G4 မှာဘောတံတစ်ချောင်းရှိနိုင်တယ်
Note Edge နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါသည့်စမတ်ဖုန်း Xiaomi Arch